PSG Oo Bayaan Kasoo Saartay Hadii Uu Neymar Dalbaday Kordhinta Mushaarkiisa Si Uu Kooxda U Joogo %
Warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaa waxay baahinayeen warar ku saabsan in ciyaaryahanka aduunka ugu qaalisan ee lagu magacaabo Neymar JR uu shardi uga dhigay kooxdiisa in loo kordhiyo mushaarka si uu naadiga usii joogo.
Majaladda The Times, ee kasoo baxda gudaha wadanka Ingiriiska ayaa la wareegeysa warbixinimo ku aadan in ciyaaryahankaan oo sida xoogan loola xiriirinayo Real Madrid, uu doonayo Hal Milyan oo dheeri ah si uu naadiga baaqi ugu sii ahaado.
Laacibkaan reer Brazil, oo hada wadankiisa hooyo ku sugan sababo dhaawac dhanka Qancowga ah soo gaaray, kaasoo inta ka dhiman xili ciyaareedkan uu garoomada uga maqnaan doono ayaa waxaa hada ka qaataa PSG, mushaar dhan 36.8 Miyan oo Yuuroo.
Warka ku aadan inuu codsaday Hal milyan oo dheeri ah ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo dhawaan Milkiilaha PSG, ninka lagu magacaabo Nasser al-Khelaifi, uu safar ku aaday wadanka Brazil, isagoona lasoo kulmay Neymar aabihiisa iyo islla xidigana.
Warar ay baahiyeen qaar kamid ah warbaahinta dalka Brazil ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in Madaxweynaha Real Madrid, ninka lagu magacaabo Florentino Perez, uu Brazil kula kulmay Wakiilka ahna Aabaha Neymr isagoona kala hadlay mustaqbalka wiilkiisa.
Laakiin, sheekooyinkaas oo dhan waxaa garabka ku dhuftay maamulka PSG, sida laga soo xigtay wargeyska reer France ee L’Equipe, kaasoo soo xiganaya qaar kamid ah madaxda kooxda caasimada Faransiiska ka dhisan, laakiin uusan magac dhabin.
Sheekooyinka ku saabsan, Neymar iyo Real Madrid, oo inta badan umuuqda kuwa xan ah ayaa waxaa ay qabsadeen Bogaga hore ee warbaahinta cayaaraha calaamka, iyadoona wax walba oo kusoo kordha saacad walba aan ka heli karto Laacib.so INSHA ALLAH